Dhibcaha salaadda cibaadadu waxay ka hortagaan kuwa guurka ku xadgudbay | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda Dhibcaha salaadda cibaadadu waxay ka hortagaan kuwa guurka ku xadgudbay
Dhibcaha salaadda cibaadadu waxay ka hortagaan kuwa guurka ku xadgudbay
Wixii Ilaah ku soo wada xidhay, ninna yuusan murugoon. Si kastaba ha noqotee taasi maahan kiiska guurka badan maanta. Ibliisku wuxuu ku beeray fara badan oo jinniyo jinsi ah guurka si uu u kala diro guurkaas. Waxaa lagu magacaabaa carqaladeyn guur. Maanta waxaan ku mashquulineynaa qodobbada salaadda badbaadinta ee looga soo horjeedo guurka carqaladeeyayaasha. Nin kasta oo qalaad ama naag naagtiina ah oo guurkaaga ku jira waa in lagu xardho magaca Ciise.
Waa inaad iimaan ku kacdaa markaad tukanayso qodobbada salaadda badbaadinta. Waxaan u adeegnaa Eebbe oo ka jawaaba salaadaha. Ishacyaah 66: 7-8 wuxuu inoo sheegayaa in sida ugu dhakhsaha badan ee Siyoon ugu tukan jirtay salaadda markay dhashay. Ilaa intaad ku foolanaysid salaadda, Ibliisku wuxuu sii wadi doonaa inuu gurigiisa ku dhex galo. Waa inaad maanta iska caabisaa oo ducadan badbaadada ee ducada ka hortimaada kuwa isqaba waxay ka saari doontaa shaydaanka weligiis magaca Ciise. Waxaan rajeynayaa inaan aqriyo maragyadaada.
1. Aabe, waan kuugu mahadnaqayaa sababta oo ah waan ogahay inaad guurkayga ku dhex geli doonto qodobbada salaadda ee magaca Ciise.
2. Waxaan tirtirayaa waxkasta oo aniga iyo salaaddayda dhex istaagi doona hada, magaca Ciise.
3. Nimcada aan u duceeyo ilaa iyo waqtiga guurkayga, igu soo dhaca, magaca Ciise.
4. Sayidow Ciise, waxaan kugu martiqaadayaa inaad ii gargaarto xaalad kasta oo guur ah.
5. Dhammaan hantidaydii guurka ahayd, ee ay naagta qalaad ku dul fadhiday, magaca Ciise ayaan ka soo saarayaa.
6. Waxaan ka saarayaa nabada, wada noolaanshaha, wadajirka, jacaylka iyo sii wadida ninkayga / afadayda iyo naagta qalaad / ninka, magaca Ciise.
7. Sayidow Ciise, ha ogaado jacaylka qalaad iyo jacaylka aan wanaagsanayn ee u dhexeeya ninkayga / afadayda iyo naag kasta oo qalaad / ninku hadda dhammaado !!! Magaca Ciise.
8. Nicmada ninkeyga / naagtayda waan ka fogeeyay naagta qalaad / magaca Ciise.
9. Waxaan ka soo horjeedaa awood kasta oo guurka ka badan, iyadoo magaca Ciise.
10.Qaar kasta oo shar ah oo qaan ah ayaa ka soo ifbaxay haweeneyda ajnabiga ah / ninkeyga hadda guurkayga ku jira, xiji guurkayga oo ku noqo magacaaga, magaca Ciise.
21.Lord Ciise, qalbi cusub ku samee ninkeyga / afadayda magaca Ciise.
22. Albaab kasta oo furan oo haweeneyda ajnabiga ah ay u adeegsaneyso inay ku kasbato nolosha ninkeyga / xaaskeyga iyo gurigeyga, waxay helaan dhiigga Ciise waana la xirayaa, magaca Ciise.
23.Ilaaha bilowga cusub, wax cusub ku bilow noloshayda guurka, oo magaca Ciise.
24G daad Wanka, ku qulquso aasaaska noloshayda guurka, oo waxaad siisaa heshiis cusub oo nolosha ah, magaca Ciise.
25.Abriyo Sayidow, Boqortooyadaadu ha ku dhisnaato guurkayga xagga magaca Ciise.
26.Rabbiyow, deriskayga dab ku dhex dhig, ninkayga iyo afadayda iyo naagta qalaad, si ay weligood u kala baxaan.
27.Qof kasta oo shar ah oo daboola wejiga ninkeyga / naagtayda, aqbal dabka Ilaah; oo waxay u gubaan dambas, magaca weyn ee Ciise.
28. Waxaan dib u helay xuquuqdayda sharci ahaaneed ee ah sida naag / nin reer ah oo ka timid gacantii naagta qalaad / nin, magaca Ciise.
29.Qabo kasta oo burburin ah oo loo sameeyo ninkayga / afadayda naagta qalaad / ninku, si xun ayaan ku dhacaa, magaca Ciise.
30. Dhagaxa dabka Ilaah ha ku tuuro madaxyada abeesooyinka, iyagoo ku bixinaya magaca Ciise.
Waad ku mahadsan tahay Ciise badbaadintaydii guurkayga oo ku jirtay magaca Ciise.
article Previous20 salaadood ayaa tilmaamaya in la burburiyo fibroids
Next article20 Ducooyinka salaadda ee ka soo badbaadinta habaarka jiilka
Diamond Oktoobar 30, 2019 saacadu markay tahay 2:00 pm
waad ku mahadsan tihiin Ciise
Jakequlynn Chantell Cleveland Diseembar 27, 2020 saacadu markay tahay 9:28
Waxaan amar ku bixiyaa barakooyinka, waxaan u xagliyaa barwaaqo iyo bogsiinta noloshayda iyo carruurtayda. Waxaan ka baryayaa faragelinta rabbaaniga ah noloshayda guurka. Waxaan ka baryayaa qof kasta oo guurka dumiya in la ceebeeyo oo 7x loo celiyo wixii ay si ula kac ah iigu dayeen inay aniga igu sameeyaan. Waxaan baryayaa wareeggan dhimashada ee iskuulku abaabulay magaaladuna waxay u noqotay goob barako aniga iyo qoyskeygaba. Waxaan ka baryayaa in kansarka iyo wax kasta oo unugyada waxyeellada leh iyo bakteeriyada jidhkayga ku qallalan oo aan bogsado. Waxaan ku ducaysanayaa in habaar kasta oo noloshayda lagaga hadlo Nexemyaah 13: 2 inkaaru u noqoto duco. Waxaan ku duceynayaa in astaamaha jinsiyadeed oo dhan la kashifo. Wixii dhiig-miirasho aargudasho ah waxaa laygu magdhabi doonaa dhaqaale ahaan. Waxaan ka baryayaa kuwa isku dayaya inay ku xad gudbaan oo ay xadaan hantida iyo dhaxalka aniga la iga faaidaysto, looguna xadgudbo oo looga aarguto..sida ay igu sameeyeen oo kale Si aan naxariis lahayn oo aan xaq ahayn. Waxaan ku duceynayaa haddii laygu ciqaabayo wax aan si cadaalad ah jirin… sida haweeneyda Isbaanishka ah ee u shaqeysa isbahaysiga caalamiga ah ee Phillips 66 ayaa tiri, isla sidaas ayey ku noqon doontaa iyaga. Waxaan ka baryayaa kuwa igu weeraraya inay midba midka kale ka jeedsado. Oo wixii cadowgu ula jeeday xumaantayda noloshayda waxay u rogi lahaayeen duco. Waxaan ku duceynayaa hadii daryeel caafimaad oo sax ah la ii dayacay beenta iyo astaamaha midab takoorka awgood .. Iyo been kasta oo laga sheegayo caruurtayda oo loo sheegayo .. runta ayaa si cad u soo bixi doonta. Naag kasta oo arrimo la leh ninkeyga waxaa loo ceebeynayaa si la mid ah sidii ay aniga ii sameeyeen oo kale. 979 318 1230. Waxaan ku duceynayaa haddii ninkaygu ka shaqeynayay wax iga gees ah inuu i waxyeeleeyo .. waa la kashifayaa. Hadday ujeeddadiisu ahayd inuu waxyeello ii geysto use waxaa si cad loogu soo bandhigi doonaa inuu yahay fal dambiyeed musuqmaasuq ah. Waxay leeyihiin taleefankayga iyo cinwaankayga IP meel kasta. Wuxuuna ka been sheegayaa dumarka uu la seexanayo. Marka waxaan ka baryayaa in aan cadaawayaasha u soo galo. Midkoodna tan ma ahayn in la sameeyo. Waxay ahayd show cunsuriyad iyo ku takrifal awoodeed iyo daryeel caafimaad. Markii ay ahayd inaad sameyso oo dhan waxay ahayd inaad ilaaliso dhaartaada munaafaqnimo oo aad ula dhaqanto aniga si iyo si gaar ah nin iyo naag. Marka waxaan ilaahay ka baryayaa inuu kashifiyo haduu cadawgayga u shaqaynayey halkii aan ka ahaan lahaa lamaanahayga. Iyo in lakala diro silsiladaha gaalnimada iyo nafta ee dumarka kale. Ayaa isku dayaya inay xakameeyaan… ninkayga. Badanaa Isbaanish. Anigana waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa soo kabashada guurka… iyo soo celinta qoyskeyga.
20 Qodobbada Salaadda ee Fikirka Muujinta Awoodaha